प्रचण्ड र माधवले देउवालाई दिए कडा चेतावनी, राष्ट्रियसभा चुनाव नसकिदै फुट्नेभयो गठबन्धन ! - Compaq News
प्रचण्ड र माधवले देउवालाई दिए कडा चेतावनी, राष्ट्रियसभा चुनाव नसकिदै फुट्नेभयो गठबन्धन !
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा चुनाव नसकिदै गठबन्धन फुट्ने संकेद देखिएको छ । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको हो। खासगरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर गठबन्धनमा मत विभाजित छ । कांग्रेसभित्रबाट स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाखमै गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
सभापतिमा पराजित डा. शेखर कोइराला समूहले त बैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको ट्रयापमा पर्न नहुने आवाज उठाईसकेको छ ।
कांग्रेस महामन्त्रीद्धय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भने बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।
खासगरी प्रचण्डले तीनै तहको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । दाहालको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि सकारात्मक बनेको चर्चा छ ।
उता, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पनि स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा खुल्न थालेको कुरा बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले यो बीचमा कानूनविद्हरुसँग पनि परामर्श गरिसकेका छन् ।
उता, निर्वाचन आयोगले भने तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्नेगरि अघि बढेका छन् ।
तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु प्रचण्ड र माधव नेपालले भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिए आफुहरुलाई मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सरकार ढालिदिने पनि चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गठन भएको यो सरकार संसद्को पूरा कार्यकाल चल्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा भने पार्टी र गठबन्धनका नेताहरुको छुट्टाछुट्टै दबाबमा परेका छन् ।